Iintlanganiso zamaKristu zabanceda kakhulu abasebatsha enyanisweni ukuba bakhule elukholweni. Kangangokuba, abo babesandula ukubhaptizwa babelungele nokuvula amakhaya abo ukuze kungenele iintlanganiso, njengoko babesenza nabo babenexesha elide besenyanisweni. Bonke ababesiya babesamkelwa ngobubele, yaza loo nto yalomeleza ngakumbi uthando lwabo.
Xa kwakukho abafundi abaliqela ababelungele ukubhaptizwa, kwakulungiselelwa iintlanganiso ezikhethekileyo emfihlekweni. NgoAgasti 1973, abazalwana balungiselela loo ntlanganiso ngaphandle kwaseSokhumi, kufutshane noLwandle Olumnyama. Kodwa zange libekhona ixesha lokubantywilisela abo babeza kubhaptizwa nababeyi-35! Yathi ingekapheli loo ntlanganiso kwafika amapolisa aza avalela abanye abazalwana noodade kuquka uVladimir Gladyuk
Bathi bakukhululwa baphinda bathetha nabo babeza kubhaptizwa. Kwiintsuku ezimbini emva kwentlanganiso yokuqala, bade babhaptizwa. UVladimir uthi: “Sasivakalelwa kukuba uYehova ukwicala lethu. Emva kobhaptizo, sathandaza kunye, simbulela uYehova.”
Inkcaso Ifak’ Isandla Ekusasazeni Iindaba Ezilungileyo
Kwiintsuku ezimbini kamva, uVladimir Gladyuk waphinda wabanjwa. Kamva yena, uItta Sudarenko, noNatela Chargeishvili bagwetywa iminyaka emininzi ejele. Nakuba babebuhlungu yile nto, abavakalisi bazimisela ukuqhubeka beshumayela nangona babelumkile.
Ukuze bangabhaqwa ngabasemagunyeni, bashumayela kwezinye iidolophu nasemaphandleni. Ngoko, inkcaso yabanceda bashumayela iindaba ezilungileyo nakwezinye iindawo.
Xa kwakulawula amaKomanisi, abavakalisi abahlala kwizixeko ezikhulu babeshumayela kwizitrato ezingaphithizeliyo nakwiipaki. Babedla ngokudibana nabantu abasuka kwezinye iidolophu nasemaphandleni ababetyelele izizalwana zabo okanye bezokuthenga. Ukuba badibene nomntu onomdla, abavakalisa babecela iadresi yakhe baze benze amalungiselelo okuphinda badibane naye.
UBabutsa Jejelava wayengomnye wabo babehamba kakhulu betyhutyha intshona Georgia. Uthi: “Ekubeni ndandinezizalwana kwiindawo ezahlukahlukeneyo, kwakungekho mntu unorhano ngokuhamba kwam qho. Emva kweminyaka emalunga nemibini, ndandifunda iBhayibhile nabantu abangaphezu kwe-20 eZugdidi nabayi-5 kwidolophu yaseChkhorotsku. Bonke babhaptizwa.”
Zazifuneka Ngamandla Iincwadi ZesiGeorgia
Kwakhawuleza kwacaca ukuba zifuneka ngamandla iincwadi zesiGeorgia. Xa bebuyela okanye beqhuba izifundo, abavakalisi babefuna iiBhayibhile okanye iincwadi zeBhayibhile ngolwimi ababeza kuluqonda kakuhle abafundi. *
UBabutsa ukhumbula indlela ekwakunzima ngayo ukuqhuba isifundo seBhayibhile ungenancwadi yesiGeorgia. Uthi, “NdandineBhayibhile nezinye iincwadi ngesiRashiya kuphela, ngoko kwakuye kufuneke ndikuguqulele oko ndiza kukufunda nesifundo.” Esebenzisa isichazi magama kuphela, wayeguqulela amanqaku eemagazini kwisiGeorgia. Wakwazi nokuguqulela yonke iVangeli kaMateyu!
AmaNgqina anesibindi ayesebenzisa oomatshini bokukhuphela abancinci ukuze enze iincwadi emakhayeni awo
Abo banomdla bawaxabisa la manqaku aguqulelwe kulwimi lwabo lweenkobe kangangokuba bakulungela ukuzenzela ezabo iikopi ezibhalwe ngesandla. Ekubeni iikopi zeBhayibhile zolwimi lwesiGeorgia zazingafumaneki lula, ezinye izifundo zeBhayibhile zaba ngabakhupheli beLizwi LikaThixo.
“Ndakhuphela Imini Yonke”
Iincwadi ezaziguqulelwe ngesiGeorgia zanikwa abazalwana nabantu abanomdla ukuze batshintshisane ngokuzifunda. Mntu ngamnye wayeba neentsuku okanye iiveki zokuyifunda. Ngoko xa abazalwana bafumana ikopi yeZibhalo zesiGrike ngesiGeorgia sale mihla, enye intsapho zange iliphose ithuba lokuyikhuphela.
URaul Karchava wayeneminyaka eyi-13 kuphela xa utata wakhe wamcela ukuba akhuphele iZibhalo ZesiGrike. Uthi: “Utata wathenga ibhokisi yonke yeencwadi zokubhala kunye neentlobo ngeentlobo zezinto zokubhala. Nakuba ndandicinga ukuba andinakuwenza loo msebenzi, ndavuma. Ndakhuphela imini yonke, ndiyeka nje xa ndifuna ukuphumza izandla zam.”
Iikopi ezibhalwe ngesandla zeMboniselo nencwadi ethi Ukuhlolisisa IZibhalo Imihla Ngemihla ngesiGeorgia
Izalamane zikaRaul zavuya kakhulu xa abazalwana bavuma ukushiya le ncwadi yayifunwa kangaka ukuze uRaul agqibezele umsebenzi wakhe onzima. Kwiinyanga nje ezimbini, wakhuphela iincwadi eziyi-27 zeZibhalo zamaKristu ZesiGrike!
Phezu kwako nje ukusebenza nzima kwabakhupheli, inani elandayo lezifundo zeBhayibhile lalisafuna iincwadi ezingakumbi. Ukuze bakhawulelane nale meko, abazalwana noodade abanesibindi bazibeka esichengeni, benza baza basasaza iincwadi ezisekelwe eBhayibhileni emakhayeni abo.
Umsebenzi wokushumayela entshona Georgia wawusiya usanda. Kodwa kuthekani ngommandla okwimpuma yeli lizwe? Ngaba wayekhona umntu kwisixeko esilikomkhulu eTbilisi owayenokunceda abantu abayifuna ngokwenene inyaniso, njengoVaso Kveniashvili, ebesithethe ngaye ngaphambilana?
Inyaniso Ifikelela Kwikomkhulu Lesixeko
Ngeminyaka yoo-1970, abasemagunyeni beSoviet bazama ukuyekisa amaNgqina ngokuwagxotha emizini yawo. Yiloo nto eyenzekayo kuOleksii noLydia Kurdas, isibini saseUkraine esafudukela eTbilisi. Bavalelwa kangangeminyaka emininzi kwiinkampu zeSoviet ngenxa yokholo lwabo.
ULarisa Kessaeva (Gudadze) ngeminyaka yoo-1970
AbakwaKurdas baxelela uZaur noEteri Kessaev ababengabantu bonqulo ngenyaniso. Intombi yabo uLarisa eyayineminyaka eyi-15 ngelo xesha, ibalisa ngokudibana kwabo no-Oleksii noLydia okokuqala: “Sazama ukubabonisa ukuba yiCawa YobuOthodoki kuphela unqulo lokwenyaniso. Emva kweengxoxo eziliqela saphelelwa yinto yokuthetha, babe bona besasiqiqisa ngeZibhalo.”
ULarisa uyaqhubeka: “Qho sisecaweni, ndandithanda ukufunda iMithetho Elishumi eyayibhalwe eludongeni phakathi kwemifanekiso emibini. Kodwa ngoba busuku ndothuka ndaphats’ ukuwa xa uOleksii wasifundela iEksodus 20:4, 5. Zange ndibuthi cwe ubuthongo kuba ndandicinga, ‘Ngaba nyhani sophula umthetho kaThixo xa sinqula imifanekiso?’”
Ezimisele ukuphenduleka, uLarisa wavukela ecaweni waza waphinda wawufunda lo mthetho othi, “Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo . . . Uze ungaqubudi kuzo.” Wayeqala ngqa ukuyiqonda eyona nto ithethwa ngulo mthetho. ULarisa nabazali bakhe babhaptizwa baza baphakathi kwamaNgqina okuqala eTbilisi.
Kwiminyaka ephantse ibe yi-20 emva kokuva kwakhe inyaniso okokuqala, uVaso Kveniashvili wadibana nomntu owayesiya kwiintlanganiso zamaNgqina KaYehova eTbilisi. Wavuya akuphinda adibane namaNgqina. Wayesele elinde ixesha elide.
Malunga neminyaka eyi-24 emva kokuva kwakhe inyaniso okokuqala, uVaso Kveniashvili waba liNgqina
Kodwa ke ekuqaleni amaNgqina ayengafuni ukumbandakanya kwizinto zawo, kuba ayesazi ukuba wayekade engumgulukudu. Amanye ayesoyika ukuba uthunyelwe ngamagosa eSoviet. Ngenxa yoko, zange amvumele ukuba aye kwiintlanganiso iminyaka emine.
Xa ade abona ukuba wayeneenjongo ezintle, amvumela ukuba abe yinxalenye yebandla aze abhaptizwe. Ekugqibeleni, uVaso wakwazi ukusondela ‘kuThixo wobulungisa’ awayemfuna esakhula! (Isa. 30:18) Ukhonze uYehova engagungqi de wasweleka ngo-2014.
Ngo-1990, kwakusele kushunyayelwa entshona nasempuma Georgia. Abavakalisi abamalunga ne-900 babeqhuba izifundo zeBhayibhile eziyi-942. Sasibekiwe isiseko solwando olwaluza kulandela.
^ isiqe. 12 Iikopi zeBhayibhile zazinqabile ngexesha lokulawula kwamaKomanisi nangona iinxalenye zeBhayibhile zazisele ziguqulelwe kwanangenkulungwane yesihlanu C.E.—Jonga ibhokisi ethi “IBhayibhile YesiGeorgia.”